मुम्बई रेल दुर्घटनामा २२ को निधन Globe Nepal News Portal
मुम्बई रेल दुर्घटनामा २२ को निधन
मुम्बई, १३ असोज / भारतको आर्थिक राजनीतिका रुपमा परिचित मुम्बई सहरमा शुक्रबार बिहान भएको भागदौडमा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या २२ पुगेको छ । शुक्रबार बिहान अकस्मात भागदौड मच्चिएपछि त्यसमा परी यो समाचार तयार पार्दासम्म २२ जनाको ज्यान गएको समाचारमा जनाइएको छ । त्यस दुर्घटनामा पररे घाइते भएका दर्जनौँ व्यक्तिको उपचार जारी रहेको छ ।
उक्त भागदौडपछि भीडमा च्यापिएर र भाग्ने क्रममा भूइँमा लड्दा अर्काेले किचेर ज्यान गएको बताइएको छ । यसरी मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या यसअघि १५ रहेको थियो । तर उपचाररतमध्येका अरु सात जनाको अपरान्ह मृत्यु भएको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् ।
मुम्बई सहर नजिकैको स्थानीय रेल स्टेशनमा रेल कुरेर बसेका व्यक्तिहरुमा एक्ककासी भागदौड सुरु भएको थियो । मुम्बईको मूल बजार नजिकैको लोवर प्यारेल र एल्फिन स्टोन स्टेशनमा सो भागदौड मच्चिएको हो । शुक्रबार बिहान करिब १०ः४५ बजे सो भागदौड मच्चिएको थियो । बिहान अकस्मात भारी बर्षा भएपछि सो रेल स्टेशनमा रहेका व्यक्ति ओतलाग्न आकासे पुलको सहारा लिन पुगेका र त्यसै समयमा पुल भाँचिन लागेको हल्ला चलेपछि उनीहरु भागाभाग गरेका थिए । यसरी भाग्ने क्रममा उनीहरुको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस क्रममा भूईँमा लडेका व्यक्तिमाथि एकले अर्काेलाई कुल्चिएका थिए । सो क्रममा अहिलेसम्म २२ जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । भारतीय रेल सेवाका अधिकारी अनिल सक्सेनाले सो दुर्घटनाको कारण बारेमा अनुसन्धान गरिने जानकारी दिएका छन् । सो भागदौडको बारेमा अनुसन्धान गर्न सरकारले आदेश दिएको जानकारी उनले दिए । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोभिन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।
Mumbai Train Accident in India
विधा भण्डारी पुन राष्ट्रपति वन्ने
चिनिया मन्त्रीलाइ प्रश्न-किन नेपाल जाेडने काेदारी राजमार्ग खुलेन ?
कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षमा वस्ने
NC's election debacle is due to some people's non-cooperation: leader Singh
Legal experts divided over National Assembly formation
प्रदेश तीनमा कसको भाग्य चम्किन्छ ?
समानुपातिकमा वहुमत आएन
अमेरिकी सिनेटमा डेमोक्रयाटको जीत
यस्ताे बनाउँदैछ चीनले नेपालकै पहिलाे अण्डर पास सहितकाे कलंकी चाेक !(फाेटाे फिचर)
काठमाण्डाैं,भदाै २६ गते । यदि समयमा काम भयाे भने अबकाे एक बर्षपछि अर्थात सन २०१८काे डिसेम्वर सम्ममा कलंकी चाेक...
नरहरि अाचार्यकाे अपिल-मेराे ठाउमा डा.महतलाइ जिताउनुस
काठमाण्डाैं,मंसिर १६ गते। लामाे समयदेखि अस्वस्थ रहेपछि राजनीतिबाट टाढा रहेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका पुर्वसांसद...
नयाँदिल्ली, २९ मङ्सिर/ भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय काङ्ग्रेसकी अध्यक्ष सोनीया...
लण्डन, २९ मङसिर / बेलायतका राजकुमार ह्यारी र मेघान मर्केलको बिहेको मिति निश्चित भएको छ । अर्को...
प्राइम टाइममा कन्डमको विज्ञापन प्रशारण गर्न नपाउने
नयाँ दिल्ली,मङसिर २६/ टेलिभिजनहरुले समाचार दिनु अगाडिको सर्वाधिक हेरिने समय (प्राइम टाइम) मा...
न्युयाेर्कमा पाइप वम विस्फाेट,अातंकवादी हमलाकाे अाशंका
काठमाण्डाैं,मंसिर २५ गते।अमेरिकाकाे न्युयाेर्कमा पाइप बम विस्फाेट भएकाे छ।वंगलादेशका २७...
दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा सोमबारदेखि संयुक्त हवाई सैन्य अभ्यास सुरु भएको समाचार छ । यस...
राजकुमार ह्यारीको अमेरिकी एक नायिकासँग विवाह हुने
लण्डन, ११ मङसिर / बेलायती राजकुमार ह्यारीको अमेरिकी एक नायिकासँग विवाह हुने सुनिश्चित भएको छ ।...
© 2017 All rights Reserved to globenepal.com